musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Akanakisa Maguta eUS ekuPona Zombie Apocalypse
Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • tsika nemagariro • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Rangarira: Kana ukasangana nezombie chaiyo, tarisa kumusoro!
Ndekupi vapenyu vane mukana wakanyanya wekuzvidzivirira pachavo panguva yekumukira zombie?
Surf Guta reUSA rinopfuura zvinopfuura zvako wepakati California guta reguta.
Mazhinji emaguta ari pazasi pechimvuramabwe kubva kuWest.
Vanoti misoro miviri iri nani pane mumwe, uye ichokwadi chaizvo kana zvasvika pakupwanya matikiti e zombie.
Gore rapfuura rave remusango - risingatarisirwe - asi chii chingave chakaipisisa? Zombies.
Iwe ungararama sei zombie apocalypse? Iyo CDC yakayera pamusoro penyaya iyi, kunyangwe rurimi-mu-zombie-dama.
Asi mune (zvisingaite?) Chiitiko chekumuka kwe zombie, vapenyu vane kupi mukana wakanyanya wekuzvidzivirira?
Akafuridzirwa na CDC's Zombie Kugadzirira 101 gwara, nyanzvi dzakachera mumakuva epa data kusvika pachinzvimbo cheMaguta Akanakisa e2021 ekupukunyuka Zombie Apocalypse.
Iyo chinzvimbo ichienzanisa mazana mazana maviri US maguta pane makumi maviri nematatu akakosha ekuratidza zombie-kugadzirira - kubva mugove wevagari mune hutano hwepanyama kune mugove wedzimba dzinowanikwa nedzimba dzepazasi kusvika pakuvhima-giya kuwana.
Tarisa uone gumi akanakisa (uye gumi akaipisisa) maguta ekurwisa undead pazasi, ichiteverwa nemamwe makuru uye mwenje wakaderera kubva mushumo.
2021 Maguta Akanakisa Ekurarama Zombie Apocalypse